Iinqununu ezilishumi eziphezulu zeR & B kwiMbali
Umculo Ukhetho oluphezulu
Ezilishumi eziphezulu kunazo zonke iiR & B IiBandla ze-All Time
Ihlabathi, Imoya & Umlilo Ukhokelela kwiindawo eziphezulu kakhulu zeR & B
Amane amaqela amakhulu kumculo we-R & B athengiswa kwiHolo & Roll Hall of Fame: Umhlaba, Umoya & Umlilo; Isley Brothers, Sly & Family Stone . kunye nePalamente-Funkadelic. Elinye iqela liye laqhuba iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu, iKool & Gang, kunye nomnye, u-Maze ophethe uFrankie Beverly, uyaqhubeka nokuthengisa emva kokuqhuba iminyaka engaphezu kwe-45.
Amaqela amabini aqalise ama-superstars. ULionel Richie wayengumculi okhokelayo we-The Commodores, kunye no- Chaka Khan baqala umsebenzi wakhe noRufus. Amaqela asele achaze i-funk: I-Ohio Players kunye neCameo.
Nalu uluhlu lwe "Ezilishumi eziphezulu zeR & B IiNkcazo Zonke ixesha."
Umhlaba, umoya kunye nomlilo
Umhlaba, umoya kunye nomlilo. IGAB Archive / Redferns
Eyilwe nguMaurice White (owadlulela ngoFebruwari 3, 2016 eneminyaka engama-74) e-Chicago ngo-1969, uMhlaba, uMoya kunye nomlilo ungenye yeembambo ezinkulu kumlando womculo. Iqela lithengise ama-albhamu angaphezu kwezigidi eziyi-100, kuquka i-platinum kathathu kunye ne-albhamu ezimbini ze-platinum. Eyaziwa ngokuba yi "Elements of the Universe," i-EW & F idibanisa izinto zomculo waseAfrika, umculo wesiLatini, i-R & B, i-jazz, kunye nedwala kwisandi esiyingqayizivele esinezwi elikhokelayo likaFilipu Bailey. Ukurekhoda iminyaka engaphezu kwe-40, iqela liye laphumelela ama-Grammy Awards ayisithupha, i-Grammy Lifetime Achievement Award, ama-4 amaMusic Awards ama-American, kwaye ihanjiswe kwiHolo kunye ne-Roll Hall of Fame, iiHlabathi ze-NAACP ze-Hame of Fame, iHowwriters Hall of Fame, kunye neHollywood Walk of Fame.
Amakhonsathi omhlaba, oMoya kunye nomlilo ayingqungquthela. Ngama-1970 kunye nee-1980, iqela lalinemifanekiso yokumangalisa, kuquka i-bass player iVerdine White eyenziwa ngelixa ikhutshwe ngaphaya kwesigaba, kwaye amalungu ebonakalayo aze aphelelwe ngama-cylinders avulekileyo njengokuba behamba ngesithuba nge- Star Trek transporter bor. Umhlaba, i-Wind & Fire ibhalile ii-classic ezingaphezu kwamahlanu eminyaka, kubandakanya "Emva koLuthando luye lwafika (1979)," Ukukhanya kweNkanyezi "(1975), kwaye" Leyo yindlela yehlabathi "(1975).
Isley Brothers. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
Ukurekhoda iminyaka engaphezu kwama-50, i -Isley Brothers yaqala njenge-trio yamazwi ngama-1950 eCincinnati, e-Ohio kunye noRonald Isley njengomculi okhokelayo owenza nabazalwana uRudolph no-O'Kelly Isley. Leli qela landisiwe laya kumalungu ayisithupha ngo-1973 kunye ne-albhamu yayo yesi-3 + 3 . Abazalwana abancinci uElnie lsley (isiginci) kunye noMarvin Isley (bass) bajoyina iqela kunye nomntakwabo kaRudolph, uChris Jasper (iibhobhodi).
Abazalwana bakaIsley baye bakhulula ii-platinum ezine, ii-six platinum, kunye nezine ze-albhamu zegolide. Ezi sixhenxe zazo zifikelele kwinombolo eyodwa kwi- bhodi yeBillboard R & B. Iingoma zabo ezimbini, "Bhuqa," kunye ne-Twist and Shout. "Baye baxoshwa kwiGrammy Hall of Fame. I-Isleys zachithwa kwiDwala kunye neHolo yoLwazi lweNkcubeko ngo-1992. Baye bafumana i-Grammy Lifetime Achievement Award, kwaye I-BET Ixesha lokuPhucula iMpilo.
IPalamente-Funkadelic. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
UGeorge Clinton uyinkokeli eyingqungquthela yeembambano iPalamente kunye neFunkadelic ezirekhodiweyo ngokwahlukileyo kwaye zenze kunye ndawonye kwi-konsathi. IPalamente yaqala ngo-1960 e-New Jersey njengeqela le-doo-op elibizwa ngokuba ngamaPhalamende, kunye ne-Funkadelic bekhonza njengeqela labo. AmaPhalamende ekugqibeleni aguqukela kwiqela eliqhelekileyo le-funk phantsi kwegama lePalamente, kwaye i-Funkadelic ithathwa njengobumba be-psychedelic soul ephefumlelwe nguJimi Hendrix kunye noSly & Family Stone. Eyaziwa ngokubanzi njengePalamente-Funkadelic, uP-Funk yaba yinto ebalulekileyo kakhulu yama-Afrika-yama-1970 yama-1970 kunye nama-80, edumileyo ngokufika "u-Mothership" kwinqanaba kwiikonsoni zee-4 zee-marathon. I-Mastermind Clinton ingumdlali weengoma ezidumileyo ehlabathini elingu-hip-hop, kunye neemvumi zakhe ezinamakhono, ikakhulukazi i-keyboardist uBernie Worrell, ibhassist uBootsy Collins (ovela kwibhande likaJames Brown ) kunye noogitars uMichael Hampton, u-Eddie Hazel noGary Shider banqulwa ngabadlali bamala.
IPalamente-Funkadelic inqaku eliphindwe kathathu kwi- Billboard ye - Billboard ye- R & B, kunye ne-"Flash Light" (1978), "Isizwe esisodwa phantsi kwe-Groove" (1978), kwaye "(Akunjalo nje) Knee Deep" (1979). I-P-Funk yachithwa kwi-Rock & Roll Hall of Fame ngo-1997.
IKool kunye neGangqa. IKool kunye neGangqa
Eyenziwe ngo-1964 eJersey City, eNew Jersey, iKool & Igqirha sele iqhuba iminyaka engaphezu kwama-50. Ebhekiselwe ngumdlali we-bass uRobert "Kool" Bell, iqela laqala njengebhodi ye-instrumental band ngaphambi kokuguqula kwi-R & B kunye ne-funk. I-Kool neGang idayise iirekhodi ezingaphezu kwezigidi ezingama-70, eziquka i-platinum ezintlanu, igolide ezintathu kunye ne-albhamu enye ye-platinum (i- Emergency in 1984). Iingoma ezisibhozo zeenombolo ziquka "Ukubhiyozela" (1980), "Ladies 'Night" (1979), kunye no "Joanna" (1983). Iintlonelo zabo ziquka amahlanu eMusic Music Awards, i-Soul Train Legend Award kunye ne-Grammy ye-Album yoMnyaka woMgqibelo woMgqibelo woMgqibelo (owawuquka ingoma yabo, "Vula iSesame").
Sly & Stone Family
Sly kunye neNtsapho yeTye. UDavid Warner Ellis / Redferns
Eyenziwe ngo-1967 eSan Francisco nguSyvester Stewart, iSly & The Family Stone yayinye yeendima ezinamandla kakhulu kuma-1960s nakuma-70. Babengabaholi be-"psychedelic soul" movement, ukudibanisa i-R & B kunye nelitye kwisandi sabo esiyingqayizivele. Ilitye Yentsapho yayingumngcipheko kunye nodidi lwabo oludibeneyo, oluhlukeneyo ngokwesini. Ukusebenza kwabo okungazilibaleki kwiMbali ye- Woodstock Festival ngo-1969 kwaphakamisa isiqu sabo kwisinye sezenzo ezihloniphekileyo kwihlabathi.
Iqela lakhupha ii-albhamu ezintathu zeplatinum, kuquka ii-five times platinum Greatest Hits ngo-1970. Babuye barekhoda ezine ezineenombolo eziquka "Abantu Bemihla ngemihla" (1968), "Siyabonga (Falettinme Be BeMice Elf Agin)" (1969), kwaye " Inzala Yentsapho "(1971). Ibhendi yachithwa kwiDwala kunye neHolo yoLwazi loLwazi ngo-1993.
Maze kunye noFrankie Beverly
Maze kunye noFrankie Beverly. Marcel Thomas / FilmMagic
Iqela lase-Maze eliqukethe uFrankie Beverly laqala njengoRaw Soul ePhiladelphia ngo-1970. Emva kokufudukela kwindawo yaseSan Francisco Bay, bafumaniswa nguMarvin Gaye owaqamba igama leqela, Maze. Ukuqala ngo-1977 ukukhishwa kwawo okuyi-self-titled release, zonke ii-albhamu zazo ze-8 zee-studio ziye zaqinisekiswa ngegolide, kunye ne-albhamu yabo ye-1981 Live In New Orleans . I-Maze inezinombolo ezimbini ezikhethiweyo, "Emuva KwiStride" ngo-1985, kwaye "Awukwazi Ukufumana Ngaphezu Kwenu" ngo-1989. Ingoma yabo yesayine, "Ngaphambi kokuba Ndiyeke," yafikelela kuphela kwinombolo 13 kwi- bhodi yeBillboard R & B ngo-1981, nangona kunjalo, ngenye yezona zinto zihamba phambili kwixesha lonke. Ngoku ilishumi leminyaka elishumi, i-Maze iyaqhubeka ibe enye yezinto ezikhangele phambili kwiR & B, kwaye iyithandwa yonyaka we- Essence Music Festival eNew Orleans,
I-Commodores. Echoes / Redferns
Eyenziwe ngo-1968 kwi-campus yaseTuskegee Institute eTuskegee, Alabama, i-Commodores yinto enye yeR & B ephumelele kakhulu kwiminyaka yee-1970 nakwii-1980. Ngaphambi kokukhulula i-albhamu yabo yokuqala i- Machine Gun kwi- Motown Records ngo-1974, ibhendi yaqala ngo-1971 njengento yokuvula i -Jackson Five . NgoLionel Richie njengomgcini wezobugcisa, iqela lirekhode ii-albhamu enye, kunye neenombolo ezithandathu, eziquka "iTime Times Lady" (1978), "Easy" (1977), kunye ne "Still" (1979). Emva kokuba uRichie eshiye umsebenzi we-solo, i-Commodores iphumelele i-Grammy Award yokuqala ngo-1986: Ukugqwesa kwe-R & B ngokugqithiseleyo nge-Duo okanye kwiQela elinamazwi okuba "i-Nightshift."
I-Rufus ebonisa i-Chaka Khan
I-Rufus ebonisa i-Chaka Khan. UMichael Marks / uMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
I-Rufus eyenza i- Chaka Khan ibhale ezine zegolide kunye nee-albhamu ezimbini zeplatinum, kuquka ne-albhamu enye yee-albhamu, ngo-1970. Ibhendi ebethe phezulu kwinqanaba le- Billboard R & B engabonakaliyo kathathu, kubandakanywa "iTunes Sweet" (1975), "Ngaba Uyakuthanda Oko Uvakalelwayo," (1979) kunye ne "Akukho mntu" (1983) owawunqoba i-Grammy Award Ukusebenza kweR & B ngokugqwesileyo yi-Duo okanye iqela elinamaVocals. Ukutshatyalaliswa kwabo bokuqala abangatshatanga, "Ndixelele into enhle," eyabhalwa nguStevie Wonder , nayo yaphumelela iGrmmy yeNtsebenzo ephezulu yeR & B nge-Duo okanye kwiQela elinamaVocals. UKhan washiya elo qela ukuba abe ngumsebenzi wedwa ngo-1978, nangona wahlangana kwakhona nebhendi ye-albhamu ka-1983, iStompin 'eSavoy - Live.
Cameo. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
Ngowe-1974, uLarry Blackmon wakha iqela laseNew York City Players eliye lalingumnye wamaqela amaninzi amakhulu awaziwa ngokuba yiCameo. Ukususela ngo-1979-1988, iqela lirekhoze i-albhamu yesibhozo neye-platinum enye. Kwakhona kwafika inombolo enye kwibhatywayo yeBillboard R & B kunye neeseshati ezine, kubandakanywa neengoma ezimbini ezilandelelanayo zokubetha iingoma ngo-1987, "Phakama!" "Candy." Ngowe-1987 no-1988, uCameo wanikela i-American Music Award ye-Soul Soul / R & B Band / iDuo / iqela, kunye nama-Awards amabili eMidlalo yeeMidlalo yoMoya: I-R & B / Soul-Single Group, Band okanye iDuo ("Word Up!") R & B / Soul Album - Group, Band okanye Duo ( Word Up!)
I-Ohio Players. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
I-Ohio Players yabalawula phakathi kwee-1970 kunye nee-albhamu ezine ezilandelelanayo enye kwi- Billboard R & B yetshathi (kuquka i-platinum yesithathu) i- Skin Tight (1974) , uMlilo ( 1974), iNyun (1975), kunye noThathiso (1976). Ibhendi kwakhona yabhala ishicilelo ezintlanu zokuqhafaza, kunye ne "Funky Worm" (1973), "Sweet Sticky Thing" (1975), "Love Rollercoaster" (1975). Ukongeza kwizandi zabo ezahlukileyo, ezixhasayo, i-Ohio Players zaziwa ngokuba yi-albhamu ephezulu.
Iingoma ezili-10 eziphezulu zika-1991
Iyintoni le ngcaciso kwi "American Pie"?
Iingcebiso ezili-10 eziphezulu zokuya kwi-CMA Music Festival
Okubaluleke kunazo zonke: IAlbum Z zeAlbum Zayibhalwe
Iingoma eziphezulu ze-Rap Rap ka-2009
IiFilimu eziPhambili ze-Hip-Hop kunye namaxwebhu oPhuculo kwi-Netflix
Izixhobo ezisemgangathweni ze-Rap kunye neeSayithi zeBeats
Iimpawu ze-Essential zeGarts Brooks
Iimpawu eziphambili ze-Soundgarden kwi-History's Band
9 Imibuzo Awufanele Uyibuze Umntu Othakazelisayo
Iingoma ezi-10 ezigqwesileyo zokugqibela kwizifundo ze-2014
Ubudala beMali eCanada kunye noLuhlu lwePhondo
Amalungelo aseGundani kunye noKhuseleko
Izinto Eziyingozi Ongazi Ngayo Ibhaktheriya
Ingxoxo ecacileyo yoBumbe
I-Stepladder Competition Format
Gcina izalathisi zaseSpain kufuphi ne-Modifier yayo
Yayiyiphi Into Eyaziwayo Eyokuqala?
Ukuqonda iiNcedo zeNkxaso, iiNdleko kunye nempumelelo yeNtengiso
Ukuthelekiswa kweNtloko kunye nentloko: 2008 Ford Mustang GT no-2008 Dodge Challenger SRT8
Iimitha neeArterial Disease
Ngaba Abantwana Bafuna Unqulo?
Biomes yehlathi kwiNyakatho Melika
Imbali yeTelescope - Imbali yeBinoculars
I-Hub yeThutho yeSantiago Calatrava kwiWTC
Nantsi indlela yokubuyisela iVespa
Ngaba amaSulumane angayenza iintsuku zokuzila ukutya ngexesha leRamadan?
Ukuchithwa kwiDatha yeDiskritha ye-2010 kwi-Com-Front and End-End Components
Ngaba umkhosi wamaGrikri waba nezingane?
Kwenzeka ntoni emva kokuba umntu enze uHajj?
Ukuhlawula kwezopolitiko kunye neNkulumo
UMary of Guise wayengumdlali oMbane ophakathi